Mpanamboatra sy mpamatsy grafit - Ozinina Graphite China
Varotra vy oksidena mafana...
Ny vovoka grafit madio avo dia nanitatra ny graphite 80mesh ho an'ny fitaovana tsy misy afo
Karazana: graphite voajanahary, graphite flakes, vovoka graphite, graphite azo itarina.
Habe: manomboka amin'ny 50mesh ka hatramin'ny 1um.
Afaka manolotra: 1. santionany maimaim-poana. 2, fanohanana ara-teknika. 3. fomba fanao. 4. 7 * 24 ora fanompoana
Hadio madio 99% raikitra Carbon Low Sulfur Micro Fine High Conductivity Graphite Powder ho an'ny pensilihazo sy fanosotra
High Carbon Superfine 1um Graphite Powder Li-battery Graphite Flakes High Expand 300 Times Expandable Graphite Sheet
Vidin'ny Graphite Superfine 2000mesh 3000mesh isaky ny kilao Graphite Powder Sheet Graphite
Graphite expanadble avo 300-400times
Graphite: vovoka graphite voajanahary, flakes graphite voajanahary, grafit azo itarina sns.
Vovoka Graphite Teboka mangotraka: 4250 ℃ Degree matevina: 1.6 ~ 2.2 Tokony hampiasaina: carburizer, fandrendrehana Rafitra: mahatohitra hafanana avo, conductive, thermal conductivity Ny vovoka grafita dia azo zaraina ho sokajy roa lehibe: 1. graphite voajanahary 2. graphite synthetic Anisan'izany , Ny graphite voajanahary dia manana ireto karazana manaraka ireto: 1. Graphite flake 2. graphite sphéroidal 3. graphite micronized 4. graphite azo miitatra 5. graphite tany.
Vidin'ny Vovoka Graphite Natural Expandable Flake
Fampiharana: Ny grafit flake dia ampiasaina betsaka amin'ny refractory mandroso sy ny coatings ho an'ny indostrian'ny fitsaboana volamena, satria ny famenoana ny coating, ny graphite flake dia ampiasaina indrindra amin'ny coating anticorrosive, coating fireproof ary coating conductive.
Fampiharana: Ny grafit an-tany dia ampiasaina betsaka amin'ny fanariana coating, fitrandrahana solika, batterie karbonika, vy, fanariana fitaovana, refractory fitaovana, loko, solika, electrode Mametaka, ary koa ny akora ny pensilihazo, electrode, bateria, graphite emulsion, desulfurizer, preservative. , antiskid agent, smelting carburizer, ingot fanariana slag, graphite mitondra sy ny vokatra hafa.
Adiresy: faritra ambanivohitra Shikan, Ciyu Town, lingshou County, Shijiazhuang, Hebei, Sina